ယုဇနပလာဇာ အနောက် တတိယအလွှာ အခန်းလေးရောင်းမည်
လိပ်စာ- အောင်သပြေလမ်း ယုဇနပလာဇာ အနောက်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မ...
Ad Number S-10191541
🔻🔻🔻မင်္ဂလာပါရှင်🔻🔻🔻 🔹🔹 သုဝဏ္ဏvip2 အနီး ပေါ်ဆန်းမွှေးကွန်ဒို အခန်းကျယ်...
🔻🔻🔻မင်္ဂလာပါရှင်🔻🔻🔻 🔹🔹 သုဝဏ္ဏvip2 အနီး ပေါ်ဆန်းမွေးလမ်းမရှိ ပေါ်ဆန်းမွှေ...
Phone No. To Contact သုဝဏၰ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္
Ad Number S-10191478
သုဝဏၰ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ Close
🎉 Kanbae Tower Garden View🎉 ဈေးတန...
Ad Number S-10191119
#သိန်း 2000 အောက်ဖြင့...
Ad Number S-10190971
Golden City ကဈေးတန်ဆုံးအခန်း
Ad Number S-10190928
(60’x80’)အကျယ်၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ၊ ရွှေပင်လုံအိမ်ရာ (park-2) တွင် လုံးချင်းအိမ်ရောင်းရန်ရှိ
Ad Number S-10192061
စမ်းချောင်းမြို့နယ် City Martအနီးရှိ တိုက်ခန်းရောင်းမည်။
765 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10192051
ရွှေစပယ်ရိပ်မွန် အဆင့်မြင့်အိမ်ရာတွင် အခန်းရောင်းရန်ရှိသည်
2,050 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10192023
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ကျွန်းတောလမ်း နှင့် ဗဟိုလမ်း လမ်းသွယ် လမ်းကျယ်ရှိ...
Ad Number S-10192012
(80’x80’)အကျယ်၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ၊ ရွှေပင်လုံအိမ်ရာ တွင် မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိ
Ad Number S-10192002
595 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10191962
Golden City Condo မှ အိပ်ခန်းတစ်ခန်းပြင်ဆင်ပြီး အခန်းသန့်ရောင်းရန်ရှိသည်။
Phone No. To Contact Barani Real Estate
Ad Number S-10191929
Barani Real Estate Close
(90’x100’)အကျယ်၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ၊ ရွှေပင်လုံအိပ်ရာ တွင် မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိ
Ad Number S-10191908
ဒဂံုၿမိဳ ႕နယ္ သမၼတရုပ္‌ရွင္‌ရံုအနီး ‌ေနရာ‌ေကာင္‌းၿမိဳ႕လည္‌ေခါင္‌ အိမ္‌ဆိုင္‌ဖြင္‌့လ...
Phone No. To Contact A1 အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်
Ad Number S-10191883
A1 အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် Close